Posted on अप्रील 4, 2010 by मनोज काफ्ले	बजारमा बेच्नलाई राखेको उपन्यासका पात्रले त्यस्तो भनेको भए लौ त भन्नुहुन्थ्यो। तर अहँ, यो कुरा पूर्वमन्त्रीले भनेका हुन्। चक्रप्रसाद बाँस्तोला- जो दरबार हत्याकान्ड हुँदा परराष्ट्र मन्त्री थिए। एक जमानामा उनी भारतका लागि नेपालका राजदूतसमेत थिए। बाँस्तोलाले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १३ औँ दिनको पुण्यतिथिमा नागरिक दैनिकले निकालेको विशेषाङ्कमा यस्तो बताएका हुन्। उनको यस्तो धारणालाई अहिले भारतीय मिडियाले पनि प्रचार गरिरहेको छ। टाइम्स अफ इन्डिया र अन्य भारतीय मिडियाहरुले यसलाई समाचार बनाएका छन्। बाँस्तोलाले त्यो लेखमा दरबार हत्याकान्डबारे बताउँदै त्यसबेला गिरिजालाई समेत मार्ने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। जानकारका अनुसार गिरिजा आफैले पनि त्यो कुरा कसैलाई बताएका छन् रे। निकट भविष्यमा निस्कने कोइरालाको आत्मकथामा पनि यो विषयमा खुलासा हुने बताइएको छ। भारत र अमेरिका मिलेर दरबार हत्याकान्ड गरेको भन्ने आरोप अरु बेला पनि नलगाइएका हैनन्। दरबार हत्याकाण्डको छैटौं दिन माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुरमा लेखेको लेखमा त्यस्तो दाबी गरेका थिए। प्रचण्डले भने राष्ट्रियताको आन्दोलन चर्काउने क्रममा यस्तै यस्तै कुरा गरेका थिए। पूर्व अमेरिकी नौसैनिक अधिकारी वाइने र्‍याडसनले पनि मन्थली रिभ्यु पत्रिकाको सेप्टेम्बर २००२ को अंकमा दरबार हत्याकान्डमा अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सीआईएको संलग्नता रहेको दाबी गरेका थिए। कहिले नखुल्ने रहस्यको रुपमा रहेको दरबार हत्याकान्डबारे बाँस्तोलाले पछिल्लो पटक के भनेका छन् त?
राजनीतिले गडफिलिङ भन्छ, सामाजिक अनुसन्धानमा ‘र्‍यासनल’ चाहिन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो भारतीय र अमेरिकीहरूको संयुक्त योजना हो। किनभने,नेपालमा भारतीय संलग्न नभई केही गर्नै सकिँदैन। र, अमेरिका यति ठूलो विश्वशक्ति छ, उसको जानकारीविना केही हुँदैन। त्यसकारण दुवै संलग्न छन्।
Filed under: समचार « सबै दलका नेताहरुको एउटै बाचा स्व. कोइरालाको श्रद्धान्जली कार्यक्रममा अमेरिकामा नेपाली मन्दिर निर्माणका लागि यज्ञ »
बालकृष्ण घिमिरे, on अप्रील 4, 2010 at 10:59 अपराह्न said:	गिरिजा प्रसाद कोइराला जिबित छनिजेल बोलेनौ अब स्व.गिरिजाको लास माथि पनि घिडित राजनीति गर्न सुरु गरेउ …………..?